Nezvedu - Chen Guang Biotechnology Boka Co, Ltd.
Platform & Kufanirwa
Sayenzi neTekinoroji Mubairo
Sisitimu uye Certification
Chen Guang Biotechnology Boka Co, Ltd. ibhizimusi repamusoro-soro rinotarisa pakubata zvigadzirwa zvinoshanda kubva kuzvirimwa zvakasikwa, isu tinonyanya kugadzira nekugadzira zvikamu zvina zvikuru zvinosanganisira zvigadzirwa zvinopfuura makumi masere.
▷ Natural Colors
Acts Spice mushoma uye Zvakakosha maoiri
▷ Nutritional and Pharmaceutical Extracts
▷ Mafuta uye Mapuroteni
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mukudya, zvizoro, kubheka, zvinwiwa, hutano hutano uye chikafu maindasitiri.
Misika yedu mikuru iEurope, America, Australia neChina, Russia, Japan, Korea nedzimwe nyika muAsia neAfrica.
National kiyi inotungamira bhizinesi pane zvekurima maindasitiri
Yakaratidza Bhizinesi Rekugadzira Champion Mune Imwe Indasitiri
National Technology Innovation Demo Bhizinesi
National Enterprise Yechikwereti
Yenyika Maindasitiri Ekurima Brand Kurima Demo Bhizinesi
Chikumbiro Benchmark YeNational Industrial Enterprise Intellectual Property
Postdoctoral Yekutsvaga Chiteshi
Chilli Kugadziriswa Kakosha Laborator ye Ministry of Agriculture
National uye Yemunharaunda Joint Injini yeLabhoritari
Dunhu Rekutsvagisa Center yeinjiniya Technology
Makiyi matekinoroji uye maindasitiri ekuburitsa uye kupatsanura kwezvisikwa zvigadzirwa zveChilli
vakawana wechipiri mubairo weNational Science uye Technology Mubairo mu2014
Kiyi Tekinoroji Kugadziridza uye Kushanda kweTomato Kugadziriswa Kwemaindasitiri
Yakawana wechipiri mubayiro weNational Science uye Technology Mubairo muna 2017
Maitiro ekugadzira uye ekutsvagisa michina uye budiriro uye kugadzirwa kwepaprika oleoresin uye capsicum oleoresin
akahwina mubairo wekutanga weSainzi neTekinoroji Progress Mubairo kubva kuChina National Light Viwanda Council mu2011.
Kiyi tekinoroji kusimudzira uye kushandiswa kwechisikigo lycopene kugadzirwa
akakunda mubairo wekutanga weChina mwenje indasitiri mubatanidzwa wehunyanzvi hwekugadzira muna 2012.
Kiyi tekinoroji hunyanzvi uye kugadzirwa kwecottonseed's yakazara mashandisiro
akahwina mubayiro wekutanga wedunhu reHebei sainzi uye tekinoroji kufambira mberi muna 2013
Capsicum Yakadzika kugadzirisa mhando kutonga kweakakosha technical Ongororo Uye Maindasitiri
akahwina yakasarudzika mubairo wenyika Commerce sainzi uye tekinoroji kufambira mberi muna 2013
Chekutanga Mubairo WeNational Enterprise Management Yemazuva Ano Kugadziridza Zviitiko muna 2012
Hebei Provincial Hurumende Hunhu Mubairo muna 2013
CCGB inosimbiswa neBRC, cGMP, National Laboratory (CNAS), ISO9001, ISO22000, ISO14001, OHSAS18001, KOSHER, HALAL, FAMI-QS, CMS, SEDEX, FDA kunyoreswa kweUSA uye yehungwaru pfuma manejimendi manejimendi system.
Zvigadzirwa zvedu, kusangana nechikumbiro cheFAO neWHO, uye mushure memakore anopfuura gumi ekuedza, ChenGuang nekuvimba nesimba rayo rawedzera chinzvimbo cheChinese pasirese, ichiita China mutungamiri wenyika mukugadzirwa kwepaprika oleoresin. Kubva pasina chinhu kune epamberi epamusoro nhanho, Chenguang anogara achiramba achivandudza.
CCGB inosungira kukosha kumunhu ane kugona. Parizvino, ChenGuang Biotech ikozvino ine vanopfuura zana vepamusoro mahunyanzvi, anosanganisira Nyanzvi dzine Special Allowance neHurumende yeKanzuru, Nyanzvi dzeMazana / Zviuru / Gumi Zviuru zveTarenda Project, Nyanzvi dzePamusoro dzeProvince 3/3/3 Chirongwa, Vechidiki Nyanzvi, vanhu vane PhD kana Master's degrees, uye vamwe nyanzvi dzehunyanzvi. Pakati pevashandi vese, iyo nhamba yepassduduate kana pamusoro account kune anopfuura 44%.
Chiono chebudiriro cheCCGB: kuvaka epasirese epasi maindasitiri base uye nekupa kune hutano hwevanhu!
Yakanaka mhando, zvisikwa zvinotungamira! Iyo kambani inoda kutora simba revashandi vese, nehunyanzvi hwedu, kunyora nyowani zvinyorwa kuti zvipe mipiro mikuru mukusimudzira kwehupfumi hwevanhu uye hutano hwevanhu!
Tarisa vhidhiyo kuti udzidze zvakawanda nezvedu
CCGB Core Kukosha
Vagovani, vatengi, vanotengesa uye vanobatirana navo, vashandi uye nzanga vese vanobatsirwa nekuvandudzwa kwekambani uye vanowedzera akawanda mabhenefiti. Panguva imwecheteyo, isu tinoramba tichienderana nenguva uye kuwana kuhwina-kuhwina kubatana.
Ccgb & Vashandi
Ccgb & Vatengi / Vashandi
Ccgb & Sosaiti
Iyo kambani inowirirana zvakanyanya nezvinodiwa zvakakosha zveumwe neumwe mushandi. Vashandi vanoshanda nesimba kwete chete mukusimudzira kwekambani, asiwo neramangwana ravo. Iyo kambani inoremekedza vashandi, inodzivirira kodzero dzevashandi uye zvavanofarira, uye inovaka chikuva chakakodzera kukura kwemushandi wega wega. Maitiro ekufambira mberi kwebhizinesi zvakare maitiro ekuvandudza kwevashandi!
Ichiri kuvandudza, CCGB inovavarira kugona uye ichienderera ichipa vatengi / vanobatirana nezvigadzirwa zvinopfuura mhando. Nekuda kwevatengi / vadyidzani, CCGB inoomerera mukuhwina-kuhwina kubatana uye inozadzisa yakajairika uye yekusingaperi kusimudzira.
Iine "Imwe Bhandi Imwe Nzira" danho
CCGB iri kupindura zvine mutsindo kuzvirongwa zvepasirese nekushandisa chirongwa che "Agriculture Going Global";
Yakagadzwa mafekitori muIndia neZambia kusimudzira mabhesheni ekudyara;
Inoshingairira kusimudzira nyika dzezvehupfumi, tsika uye tekinoroji kuchinjana pamwe nekubatana;
Maindasitiri Urombo Kuderedza uye Rural Revitalization
Seyenyika kiyi inotungamira bhizinesi mune zvekurima maindasitiri, CCGB inoshingairira inoita chinzvimbo chinotungamira mukuratidzira;
MuXinjiang nePurovhinzi yeHebei, CCGB inogadzira chigadziko chemiti, inogadzirisa mamiriro ekurima emuno, uye inowedzera mari yevarimi;
CCGB inotyaira varimi mazana matatu ezviuru kuti vawedzere mari yavanotambira neinosvika mabhiriyoni maviri ema Yuan gore rega rega;
CCGB yakanyanya kutarisana nekuvandudzwa kwedzidzo;
Isu takasimbisa "Chenguang Scholarship" uye tikamisa dzidziso yekuvandudza chigaro chekutsigira varombo vadzidzi;
Kwemakore, zvipo zvedu mudzidzo zvasvika zvinopfuura miriyoni imwe yeRMB.
Kudzivirirwa Kwemagariro & Denderedzwa Ehupfumi
CCGB iri kunetsekana zvikuru nezvekushandiswa kwakazara kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye zviwanikwa;
CCGB inonamatira kune yakatenderera hupfumi, ichishandisa yega chikamu chemuti kuita iyo yakasikwa kuburitsa.
Kubudikidza nepfungwa utsanzi uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, isu taona iyo "zero" mutengo we lycopene uye wemazambiringa mbeu yekuburitsa kugadzirwa;
Gadzira zvigadzirwa zvepasirese zvepasirese, Batsira kuhutano hwevanhu!
Natural zvigadzirwa zvigadzirwa, pamwe nekuchengeteka kwayo, kusvibira uye hutano, zvave indasitiri inovimbisa yekubuda kwezuva.
Iyo yakanaka mbishi yezvinhu base, yepamusoro kusimudzira nharaunda, hombe-diki, yakaderera-mutengo kugadzirwa mabhenefiti uye epamusoro-magumo kutsvagisa nekusimudzira, mhando kutonga masimba kugona ndiyo hwaro hwakasimba hwekuvandudzwa kweCCGB.
Kubudirira kwepaprika oleoresin ingori kutanga kwekambani yedu. Kuti tigone kuchinjira kuchinhu chitsva chehupenyu: kudzokera kuhunhu uye kutarisisa kuhutano uye hutano, isu takatsanangura yedu pachedu budiriro - tichishandisa biotechnology kupinda muindasitiri yehutano nekuzvipira kubatsira kuhutano hwevanhu.
"Matanho Matatu" kukura kunetswa
Huru Hutano Indasitiri
Zvekuvandudza mune ramangwana, isu parizvino tiri kushanda pane zviwanikwa zvekutepfenyurwa kweiyo 3'rd Nhanho yenzira yedu: 1'st Nhanho, chaiwo mavara 2'nd Nhanho, wedzera kune chimwe chirimwa chinoshanda zvigadzirwa kuburitsa; uye zvichibva pane izvo zvakanaka, danho re3'rd nderezvigadzirwa zvekudya zvinovaka muviri uye chiChinese mishonga yemakwenzi, ichienda muindasitiri hombe yehutano.
Pahwaro hwezvinhu zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvechigadzirwa zvigadzirwa, CCGB inowedzera huwandu hwemaindasitiri uye inosanganisa kushanda kwezvakatemwa nemiti kugadzira zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano; Isu tinobatanidza zvinobudirira michina yekutsvagisa chirimwa uye yechinyakare Chinese mushonga dzidziso kuvandudza mishonga yechiChinese kuvandudza uye kuvaka zvine simba zvine chekuita nezvehutano zvigadzirwa, mishonga indasitiri base. Tiri kuzvipira kuita zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano, mishonga inogona kupihwa nevanhu.
Natural Essence yeHutano hwevanhu
Isu tinogara tichishandisa epamberi sainzi uye tekinoroji kutora inobudirira zvinhu uye zviwanikwa kubva kune zvakasikwa zvigadzirwa, uye kuunza kwakawanda kuchengeteka muhupenyu hwevanhu.
Isu takazvipira kuvandudza iyo yakasikwa mhando yechikafu chedu uye kusangana nezvinodiwa zvehutano hwevanhu. Isu tinotarisira kuchengetedza hutano hwevanhu nebasa rechokwadi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuti hupenyu huve hwakajeka uye nemufaro.
★Iva akavimbika uye akavimbika, Shanda nesimba
★Inoshingaira uye inovandudza
★Kuzvipira, Kuvimbika uye kuzvidzora
——CCGB Enterprise Mweya